Cement Paint, Plaster Line, Marble, Girazi, Dudziro Dzakawanda Dzemazuva Ano Maitiro!
musha / Interior design / Cement Paint, Plaster Line, Marble, Girazi, Dudziro Dzakawanda Dzemazuva Ano Maitiro!
2021 / 05 / 29 kupatsanuraInterior design 7303 0
Kududzira kwakawanda kwemaitiro emazuva ano
Chimiro chazvino uno, iyo huru yekutarisisa yemhuri yakasununguka uye inoenderana. Iko pfungwa yemitsetse yakapfava uye yakapinza, chaiyo nzvimbo chiyero, yazvino dhizaini dhizaini, pamwe nekuronga kwazvino kurongeka. Ndeipi inonyanya kumiririra yemaitiro echazvino maererano nezvinhu?
Vagadziri vaviri veiyo HD-m2 Studio vane makore gumi nemaviri ekuziva ruzivo mukugadzirwa kwemukati. Iye akanaka pakushandisa akasiyana siyana zvigadzirwa kuratidza runako. Cement pendi, plaster mutsetse, machena uye girazi zvese zvakanakisa dhizaini kurudziro kwavari. Ino nguva makesi mana, zvichiteerana, akaturikira chimiro chazvino chemidziyo ina dzakasiyana, chimwe nechimwe chakasarudzika.
Runako rwependi yesimende
Iyo yakajairika nzvimbo yenyaya iyi inoshandisa iyo imwecheteyo vara yezvinhu kuti ienzane neyese. Cement pendi, huni uye grey grey jira rinodhumhana kugadzira akasiyana ekuona manzwiro. Nezve pendi yesamende, tora pano kuti udzidze: Chii chinonzi pendi yesamende?
Iyo magnetic track mwenje kumadziro ndeyekusimbisa kwekushongedzwa kwenyaya iyi. Izvo zvese kushongedza uye chinhu chakakosha chemwenje yemuno. Nezve magetsi ekutsvaira magetsi, tinya pano kuti udzidze: Chii chinonzi magnetic suction mwenje?
Iyo yekudyira uye yekicheni nzvimbo ine akawanda mabasa ekubika, kudya uye kuchengetedza. Iyo yedombo zvinhu uye esimende pendi zvine zvakasikwa kunzwa, kuchinjisa iwo dingindira uye kusanganisa munzvimbo.
Madziro kumativi ese epasiway akabatanidzwa nemikova. Iyo inotsvedzerera yemagineti mwenje track inotambanuka kubva pamusuwo, ichiwedzera simba kune yakatetepa uye nerima nzvimbo.
Iyo yemukati yekamuri revana haishandisi ruvara kusimbisa huhwana, uye simbi uye isina kuchena inovhura yakawanda nzvimbo yekufungidzira.
Iyo yakachena uye yakachena matema uye machena matoni ari muchimbuzi anoratidza hunyanzvi hwesitayera yazvino. Tile mune chimiro che grille yakavezwa yakatwasuka, ichipa iyo yakavharwa yekugezera pfungwa yekutambanudza kukwirira kwepasi.
Runako rwe gesso mutsara wenyasha uye unodzivirirwa
Kana zvasvika kune gesso mutsetse, panogara paine stereotypical tsananguro, sekunge inogona kungomiririra yeEuropean kana yeAmerican maitiro. Nekudaro, mune yazvino dhizaini, zvakare iri yakasarudzika uye yakasarudzika nzira yekutaura.
Iyo nzvimbo yese yakasiya iyo yakaoma dhizaini, ine plaster yakatwasuka mitsara yezvinhu, uyezve iine nyoro mitsara yemachira fenicha uye zvishongedzo, izvo zvinokodzera zvine mwero mamiriro enguva dzose.
Pane iyo hombe chena yekumashure madziro, inoonekwa yegoridhe inokamura mutsetse yakabatanidzwa negirazi rakasviba. Mufananidzo usingafadzi unowedzera pfungwa yenzvimbo yepamusoro, uye hunyanzvi hwekugadzira hwakajeka.
Iresitorendi inosvitsa huwandu hwakawanda hwechiedza chechisikigo, icho chinosimbisa magadzirirwo enzvimbo yemukati. Chimiro chemwenje uye mumvuri wezvinhu zvakanyatso nyorwa.
Iyo inoshanduka maratidziro enzvimbo mubedroom inoita kuti chiitiko chive chakasununguka, uye shanduko dzechiedza nemumvuri zvinoumba pfungwa yenzvimbo apo chokwadi chinosangana neichoicho, icho chinoshamisa zvinoshamisa.
Iyo chena madziro yakamisikidzwa mutanda yekupfekedza tafura inoita kuti nzvimbo iwedzere kuoneka ine simba uye yakapfava, uye inoyevedza huni ruvara munzvimbo inobvumidza vanhu kudzungaira mumhepo yepanyama uye kuzorora.
Iyo inopenya pingi uye yepakutanga huni ruvara inoratidzira inotapira uye yakapfava mhedzisiro yekamuri yevana, uye chimiro chakangwara chinoburitsa yakawanda nzvimbo yevana yekutamba.
Mwenje wepasi wakanaka, wakareruka uye wakasununguka, unovhenekera nzvimbo yekurara. Wicker yakarembera cheya pamberi pehwindo inovhura inodziya nzvimbo.
Iyo hexagonal mosaic tile yekugezera izere nekufarira. Izvo zvakanyatso kugadzirwa dhizaini dhizaini uye inonakidza color scheme inodzosera kunyaradzwa kwenzvimbo.
Marble boorish uye runako runako
Paunotarisa kumusoro, iwe unogona kuona kuti marble inoshandiswa sechinhu chekushongedza cheiyo nzvimbo munzvimbo zhinji mune iyi kesi. Sofa isina kujairika inogadzira arc munzvimbo, kusiyanisa nzvimbo mbiri. Iko kusanganiswa kwakakwana kwechiedza chechisikigo uye mwenje kunogadzira nzvimbo izere nemood.
Irregular marble izere neyakaenzana yepamusoro kirasi, uye kuomarara kwedombo kunowirirana neiyo rustic kukwirira kwenzvimbo yepakati yemukati. Kunzwisisa uye kupokana kunopesana kutaridzika, kuratidza runako rwekusiyanisa pfungwa yezera uye yemazuva ano. Nezve Irregular Marble, tinya pano kuti udzidze: Chii chinonzi liquid marble?
Iwo matoni matema anoonekwa munzvimbo diki yenzvimbo anopa pfungwa yekufungisisa uye kudzikama. Yakadzika-kiyi kukwirira pasina kurasikirwa kwematanho, kuitira kuti nzvimbo hunyoro hwakanyarara uye hunyoro, zviri nyore kurega vanhu vazorore.
Kubva kumusoro kwetafura kusvika kumakona, tafura yekudyira yakagadzirwa nemarble yakachena inoita basa rekupedzisa kubata. Iko kuisirwa kwehunyanzvi pakona kunoitwawo nemarble sehwaro. Iko kushushikana kwenzvimbo kwenzvimbo kunowedzera kugutsikana kwenzwi.
Iyo seti yemarble yakavhurika gridhi yakadzamidzirwa mukabati, ichipindura kune zvinongedzo zveiyo nzvimbo, uye zvakasiyana zvinhu zvakatswanywa kugadzira matanda enzvimbo.
Iko kusanzwisisika kwerunako rweChanghong girazi
Kuenderera mberi nemhando yemazuva ano yekupfupika uye yakajeka kuumbwa kwakaomarara, kushandiswa kwegirazi kunogadzira pfungwa yemafashoni munzvimbo. Ichi chemazuvano asi chisina kurema zvinhu ndiwo mutumbi mukuru wedhisheni yekugadzira, ine zvinhu zvesimbi semataurirwo, ichigadzira nzvimbo yemazuva ano inoyevedza asi isingaremi.
Changhong girazi ndicho chinhu chakakosha pakushongedza mune ino kesi, uye iyo simbi-yemhangura simbi isina tsvina inoratidza hunyanzvi hwekushongedza. About Changhong Glass, tinya apa kuti udzidze zvimwe: Chii chinonzi Changhong Girazi?
Mukuvakwa kwenzvimbo, inoteedzera yazvino uye yakasikwa mutinhimira. Iko kushandiswa kwegirazi zvikamu kunogadzirirwa kuwedzera mwenje wechiedza munzvimbo. Iyo yakakomberedzwa dhizaini yekona inobvumira vagari kuti vanzwe kunyaradzwa kwenzvimbo dzesimba mitsara.
Iyo kabati inotambanudza kubva kumadziro ine zvese zvekupfekedza uye zvekupa mabasa, uye anoratidzwa magirazi magetsi anoratidza poetic ekupfeka chiitiko.
Mukuenderana netoni yenzvimbo, iyo terrazzo madziro mune yekugezera ine yakanakisa kugadzirwa, uye iro ruvara rakadzikiswa asi rinoratidzira kunoshamisa kunonaka. Iyo yendarira Hardware uye mesh girazi mwenje inoratidzira husimbe mamiriro enzvimbo.
Pakapfuura :: "Martial Arts Master" Inovhura Noodle Shop, Natural Chinese Martial Arts Style | Yiding Mabasa Matsva Zvadaro: Chii Chinonzi Cement Paint?
2021 / 08 / 15 5497
2021 / 08 / 15 5838
2021 / 08 / 14 5520
2021 / 08 / 14 6086
2021 / 08 / 14 5268